तेल सर्किट ब्रेकर। तेल सर्किट तोडने को प्रकार
विशेष तेल सर्किट तोडने प्रयोग गरेर बिजुली द्वारा संचालित छ कि उपकरण को सञ्चालन स्वचालित गर्न।
तेल स्विच -, विद्युत प्रणालीमा सक्रियता वा व्यक्तिगत सर्किट को निष्क्रियकरण आयोजित जो आफ्नो सामान्य सञ्चालन मोडमा वा आपतकालीन समयमा, स्वयं वा एक स्वचालित प्रणाली आदेश द्वारा एक यन्त्र। यस्तो उपकरण धेरै आपूर्ति चेन संगठनमा प्रयोग गरिन्छ।
विद्युत उपकरण तेल सर्किट को प्रकार निम्न प्रयोग गर्न सकिन्छ को स्थिर संचालन सुनिश्चित गर्न:
को ट्यांक - यो उच्च क्षमता र तेल प्रणाली।
कम तेल - ढांकता तत्व र तेल को एक सानो रकम प्रयोग गरेर।
योजना तेल स्विच श्रृंखला scission समयमा गठन Arcs बुझाने लागि विशेष उपकरण छ। चाप उपकरणहरू जस्तै उपकरण को सञ्चालन सिद्धान्त निम्न समूह विभाजन गरिएको छ:
बाध्य हावा विस्फोट काम वातावरण प्रयोग गरेर। यस्तो उपकरण pressurizing र एक श्रृंखला को बिच्छेद को साइटमा इन्धन आपूर्ति लागि विशेष हाइड्रोलिक संयन्त्र छ।
तेल मा चुम्बकीय quenching विशेष electromagnets तत्व जो सर्किट द्वारा सिर्जना साँघुरो भंग च्यानलहरू मा चाप उत्प्रेरित गर्छ कि एक क्षेत्र उत्पादन प्रयोग सञ्चालन गरिएको छ।
तेल स्विच avtodutem। यस प्रकारका योजना तेल स्विच जो बाहिर ट्यांक मा तेल वा ग्याँस को आन्दोलन को लागि गठन चाप ऊर्जा को रिलीज वहन विशेष प्रणाली मा, सेल लागि प्रदान गर्दछ।
ट्यांक सिस्टम प्रकार
मृत ट्यांक सर्किट तोडने कारण डिजाइन को सादगी गर्न धेरै लोकप्रिय छन्। तेल स्विच इनपुट र चाप सम्पर्क प्रणाली, तेल ट्यांक मा राखिएको छ जो हुन्छन्। प्रणाली मा उपकरण प्रयोग गर्दा 3-20 किलोवाट (चरणहरु) को एक भोल्टेज सबै तीन सम्पर्क छुट्टै ट्यांक मा 35 केभी भोल्टेज चरण को सूचकांक वृद्धि स्थित हुनुपर्छ संग, एक ट्यांक मा प्रबन्ध गर्न सकिन्छ। दुई अवस्थामा यो पहिलो embodiment लागि, स्वचालित वा टाढाको नियन्त्रण प्रणाली लागि प्रयोग गर्न सकिँदैन तथापि, मार्गदर्शन मोड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, र दोस्रो मिसिन को रिस्टार्ट आवश्यक छ।
odnobakovogo प्रकार मा सबै तीन चरणहरु तेल काम प्रयोग दोश्रो देखि र ट्यांक शरीर देखि अछूता तरल पदार्थ सञ्चालन सम्पर्क ढाकिएको गर्न संग नै कन्टेनर मा हुँदा। तेल, साथै, भंग नेटवर्क को समयमा दोश्रो देखि गठन चाप र बिजुली आपूर्ति चरणहरु को अलग निभाउन गर्न गर्दछ।
सञ्चालनको सिद्धान्त odnobakovyh स्विच
ट्रिगर गर्दा, प्रणाली पहिलो सम्पर्क खाली चाप कोठामा हुन्छ। उच्च भोल्टेज नेटवर्क एक चाप कारण उच्च तापमान गर्न जोखिम पनि तेल decomposes जो संग ब्रेक सम्पर्क मा। चाप नै हुनेछ तेल ग्याँस बबल गठन हुन्छ मा चाप, को प्रभाव अन्तर्गत। को सिर्जना बबल 70% हाइड्रोजन, र यो ग्याँस यो अवस्थामा दबाब आपूर्ति गरिनेछ। हाइड्रोजन गर्न एक्सपोजर र artificially उत्पन्न दबाव सम्पर्क विच्छेद समयमा गठन deionalizatsii चाप हुनेछ। त्यसैगरि स्विच तेल सर्किट आयोजित।
स्विच trehbakovogo को सञ्चालन सिद्धान्त
Trehbakovy स्विच सञ्चालनको अलि फरक सिद्धान्त, उच्च-भोल्टेज नेटवर्क को यसको प्रयोगमा कारण छ। तेल स्विच नेटवर्क मा प्रयोग गरिएको छ जो voltages माथि चाप बुझाने कोठामा मा, 35 केभी विस्फोट सिर्जना विशेष संयन्त्र छ। प्रयोग interrupter सिस्टम सञ्चालनको धेरै मोड समावेश गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूले तपाईंलाई सम्पर्क प्रजनन समयमा Blowout को गति वृद्धि गर्न अनुमति दिन्छ।
यो प्रक्रिया सुरक्षाको लागि, बिजुली बासना तत्व प्रत्येक चरण लागि छुट्टै ट्यांक प्रयोग गरेर विशेष तेल जलाशय मा राखिनेछ। साथै, विभिन्न ड्राइव तेल सर्किट तोडने, अनुमति चयन गरिएको दिशा मा एक काम तरल पदार्थ पेश गर्नुहोस्। प्रणाली एक अलग धकेलना प्रतिनिधित्व छ जो चाप, आकार नियन्त्रण गर्न विशेष तत्व छ। हालको द्वारा गठन चाप को विफलता पूर्ण काटेर भएपछि।
प्रणाली को लाभ
यस प्रकारका चाप-बुझाने सिस्टम यो धेरै आपूर्ति चेन मा प्रयोग गरिन्छ कारण जो सुविधाहरू, एक नम्बर छ। प्रणाली को लाभ समावेश:
क्षेत्रीय अवरोध उच्च भोल्टेज को नेटवर्क मा यस्तो उपकरण प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ कि को उच्च दक्षता।
डिजाइन को सादगी यसलाई विश्वसनीय र maintainable बनाउँछ। तेल स्विच को मर्मत बाहिर यस्तो उपकरण स्वचालित नियन्त्रण प्रणाली वा अपरेटर एउटा महत्त्वपूर्ण टीम को कार्यन्वयनका लागि जिम्मेवार छ रूपमा, व्यवसायीक द्वारा विशेष लगे गर्नुपर्छ। यो पनि उपकरण यस प्रकारको एक अपेक्षाकृत कम लागत गुणस्तर निर्धारण गर्छ।
प्रणाली को बेफाइदा
यो सिस्टम बुझाने को वृद्धि लोकप्रियता भए तापनि विद्युत चाप, सम्पर्क को बिच्छेद गरेर गठन गरिएको छ जो, यो केही बेफाइदा छ:
कार्यहरू को विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित गर्न तेल को एक ठूलो मात्रा प्रयोग गरेर।
ठूलो परिमाणमा तेल प्रयोग गर्न आवश्यकता सम्बन्धित ठूलो आकार फट अवशोषक।
आगो जोखिम। कारण वास्तवमा त्यो तेल वृद्धिको चाप तापमान को गठन को समयमा। को काम तरल पदार्थ को मात्रा सिफारिस स्तर भन्दा कम छ भने, यो जोश र आगो गर्न सम्भव छ।
उपकरण को कम तेल प्रकार
स्विच VMP तेल, कम तेल, वा अन्य शब्दहरू मा, काम तरल पदार्थ अलग्गै प्रणाली को तत्व अलग दोश्रो देखि, यो ढांकता सामाग्री बनेको विशेष तत्व छ सुनिश्चित गर्न। यस मामला मा तेल मात्र ग्याँस को गठन को लागि प्रयोग गरिन्छ। क्षेत्रीय को arcing कोठामा उपकरणबाट अलग छ जसमा प्रणाली, प्रत्येक तत्व। यो एक विशेष ड्राइव सिस्टम, एक क्रस-उड्ने प्रदान गर्दछ जो प्रयोग गर्दछ।
कारण सम्पर्क को बन्द राज्य समयमा तेल को सानो रकम गर्न विद्युत discontinuity को विश्वसनीयता बढ्छ जो कोठामा, प्रयोग तेल को स्तर माथि अवस्थित छ। कारण वातावरण को दूषण यसलाई अन्ततः यसको कोर ढांकता गुण गुमाउन सक्छ। साथै, तपाईँले यस्तो प्रणाली सिर्जना गर्दा, डिजाइनर खातामा समय, अपघटन उत्पादनहरु गठन गर्दै भन्ने तथ्यलाई लिएका छन्। तिनीहरूलाई लागि, विशेष तेल विभाजकों सिर्जना गरियो।
लाभ र सिस्टम को बेफाइदा
यस प्रकारका तेल सर्किट तोडने अक्सर एउटा सानो लम्बाइ र क्षमता को बिजुली आपूर्ति सर्किट मा एक विश्वसनीय नेटवर्क ब्रेक प्रदान गर्न प्रयोग गरिन्छ। यसको लाभ निम्न समावेश:
तेल को एक सानो रकम प्रयोग गरेर।
थोरै आकार र निर्माण को वजन, यसको स्कोप वृद्धि।
यी सकारात्मक गुणहरू त्यहाँ एक उच्च-भोल्टेज नेटवर्क छ जहाँ बिजुली उद्यम, कार्यालय र अन्य औद्योगिक भवन को पुनर्जनन, मा खाली को नेटवर्क प्रणाली प्रयोग गर्न अनुमति दिनुभयो।
यो बेफाइदा निम्न समावेश:
निरन्तर तेल स्तर अनुगमन र आवश्यक भएमा अप माथि आवश्यकता को विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न।
यसको निर्माण मा महंगा ढांकता सामाग्री प्रयोग संग सम्बन्धित उपकरण को उच्च लागत।
तेल सर्किट प्रकार तिनीहरूले प्रयोग गरिन्छ जो बिजुली आपूर्ति सर्किट को विशेषताहरु अनुसार चयन गरिएको छ।
छत वालपेपर गोंद रूपमा
ठोस लागि ठोस टाँसिएको। ठोस गर्न गोंद फोम
बांस फर्श: फाइदा, बेफाइदा, सुविधा स्टाइल, हेरविचार सल्लाह, दृश्य र समीक्षा
टाँस्न कार्बन फाइबर - कार को एक सरल परिवर्तन
रूस मा आगो सुरक्षा स्तर
त्यहाँ त्रुटि 711 थियो भने के इन्टरनेटमा जडान हुँदा
संसारभरि असामान्य बिरुवाहरु। सिकारी सौन्दर्य वा उपयोगिता असामान्य
साइकल श्रृंखला: साइकिल मोडेल, स्थापना, समायोजन को आकार
कम्बोडिया कहाँ छ, र उड गर्न कति?
महत्वाकांक्षा - यो दुष्ट वा सद्गुण हो?
"जीवन रोड"। पहिलो सोभियत ध्वनि फिलिम को अभिनेता
क्रास्नोडार Inal बे: एक समीक्षा। नक्सामा Inal खाडी
Cranberries पाइ। नुस्खा cranberries संग केक।
तर संग पास्ता: एक फोटो सहितको नुस्खा